मङ्सिरको चुनावपछि तीनओटै पार्टी एकता गर्ने , के-के छन् सहमतिपत्रमा ? – YesKathmandu.com
काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालका वीचमा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा तीन पार्टीका तीन नेताले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा आगामी मंसिरमा हुने चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न आठ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति बनाइएको छ । सो समितिमा एमालेका चार,माओवादीका तीन र नयाँ शक्तिका एक जना नेता रहनेछन् । एमाले र माओवादीका अध्यक्ष प्रमुख नेता रहनेछन् ।
पार्टी एकताको बिस्तृत खाका संयोजन समितिले तयार पार्ने घोषण पनि पत्रकार सम्मेलनमा गरिएको छ । बैचारिक छलफल र बहसद्धारा क्रान्तिको सिद्धान्तलाई विकसित गर्दै लगिने पनि पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरियो । तीन वटै पार्टी सम्मिलित चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाउने पनि नेताहरुले घोषणा गरेका छन् ।
केके छन् घोषणापत्रमा ?
-एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने
-आठ सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समितिमा एमालेका चार माओवादीका तीन जना र नयाँ शक्तिका एक जना रहनेछन् ।
-एमाले र माओवादीका अध्यक्ष प्रमुख नेता रहने ।
-बिस्तृत खाका संयोजन समितिले तयार पार्ने ।
-बैचारिक छलफल र बहसद्धारा क्रान्तिको सिद्धान्तलाई विकसित गर्दै लगिनेछ ।
-तीन वटै पार्टी सम्मिलित मस्यौदा समिति बनाउने
-प्रदेश र प्रतिनिसभाका निर्वाचनपछि एकता घोषणा गर्ने ।
-सार्वजनिक रुपमा नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना नगर्ने ।
-छरिएका कम्युनिष्ट र बामपन्थी पार्टी र समूहलाई एकीकरणको प्रवाहमा सहभागी हुन अपिल गर्ने
-मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिसभामा नयाँ शक्ति र अन्य समूहलाई आपसी समझदारी गर्ने
-एमालेका ६० प्रतिशत र माओवादीका ४० प्रतिशत उम्मेदवार हुने
-साझा घोषणापत्रमा सहभागी हुने
-निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाउने
-निर्वाचनमा सहकार्य तथा तालमेलका लागि लोकतान्त्रिक तथा देशभक्तलाई अपिल गर्ने ।